I-trailer yokugcina yeJurassic World: Fallen Kingdom is here | Izindaba zamagajethi
IJurassic World: UFallen Kingdom uqala i-trailer yayo yokugcina
I-saga ehola imali ephezulu kakhulu yama-dinosaurs emlandweni ibuya nesitolimende sayo esisha kulo nyaka. Sikhulumile, kungenzeka kanjani ngenye indlela, ngeJurassic Park. Isaga manje sibuya nokulandelana kwefilimu eyakhishwa ngo-2015. Le filimu entsha iza ngaphansi kwegama lika IJurassic World: Umbuso Owile. Isitolimende esisha se-saga esizoba iqondiswe ngu-JA Bayona.
Umqondisi waseSpain ubephethe ukuthola ngemuva kwekhamera kulesi sitolimende esisha. Enye yamafilimu abelindelwe kakhulu onyakeni, ngemuva kwempumelelo enkulu yeJurassic World eminyakeni emithathu edlule. Manje, Sivele sinayo i-trailer yokugcina yeJurassic World: Fallen Kingdom phakathi kwethu.
Kulokhu siyabona ukuthi abalingiswa abaphambili besitolimende sokuqala Babizelwe ukutakula isamba sezinhlobo eziyishumi nanye ezisesiqiwini. Isizathu kungenxa yokuthi basengozini yokuqhuma kwentaba-mlilo okuseduze kulesi siqhingi. Ngakho-ke bobabili bathuthela kuyo futhi yingale ndlela le adventure entsha eqala ngayo.
Bazothuthela esiqhingini ukuyokonga lezi zinhlobo futhi ngaleyo ndlela baqinisekise ukuthi zihlala isikhathi eside. Yize kungeyona yonke into elula njengoba ibonakala. Ngoba abantu ababathumele esiqhingini ababonakali benezinhloso ezinhle njengoba bebebukeka bezibonile ekuqaleni. Njengoba izinhlelo zabo ukusebenzisa lezi zilwane ngezinjongo zempi. Into okuzodingeka bayigweme ngazo zonke izindlela abalingisi abaphambili.
Ngakho-ke iJurassic World: UFallen Kingdom ithembisa ukuba ngomunye wama-movie aphumelela kakhulu kuleli hlobo.. Isitolimende sokuqala saba impumelelo enkulu ehhovisi lamabhokisi eminyakeni emithathu edlule. Ngakho-ke kulindeleke ukuthi lesi sitolimende esisha siphinde impumelelo efanayo.
Le filimu izongena ezinkundleni zemidlalo yeshashalazi ngoJuni 7, ngakho ukulinda akukude kakhulu. Okuncane kakhulu manje njengoba sesine-trailer yokugcina yeJurassic World: Fallen Kingdom. Kuzoba mnandi ukubona ukuthi i-JA Bayona isibekele ini ekungeneni kwakhe okuhle eHollywood.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ikhaya » Ama-movie nochungechunge » IJurassic World: UFallen Kingdom uqala i-trailer yayo yokugcina
I-GXT 590 Bosi Bluetooth yisilawuli esisha sokudlala seTrust se-Android neWindows
I-AOC Ingenisa i-First Monitor nge-AMD Radeon FreeSync 2 neVESA DisplayHDR 400